Death – The Ulwazi Programme
Ngemuva kwesikhathi esingangonyaka noma iminyaka emibili umnumzane noma umama wekhaya eshonile, kwenziwa umsebenzi wokumbuyisa ngokosiko lwesintu. AmaZulu akholelwa ukuthi lapho kusuke kubekwe khona umuntu emathuneni usuke esagciniwe okwesikhashana ngaphambi kokuba ahlangane namanye amathongo noma amadlozi. Usuke engakalungiswa, kumele enzelwe umsebenzi agezwe, kuyima ehlanganiswa nomndeni wakhe. Umsebenzi wokubika Uma kuzokwenziwa lomsebenzi umndeni kufanele uqale ubikele amathongo noma … Read more
Ukuzila uma kushoniwe kuwusikompilo lwabantu abathile abamnyama. Imindeni iyahlukana ngendlela ezila ngayo. Lapha sizobheka okwakwenziwa ngabantu uma beganele esithenjini. Esikhathini sakudala umuntu wesifazane uma eganile wayehlala ekhaya akhulise izingane kuthi umyeni wayo asebenzele umndeni. Ukuzilelana kwakwenzeka uma omunye wabantu besifazane isimo siphoqa ukuthi ashiye ekhaya ayosebenza edolobheni. Lokhu wayekwenza ngokuxhumana nomndeni wonke ukuthola imvume yokuthi … Read more
Ukukhunyulwa Kwenzila Ekhaya
Umsebenzi wenziwa uma umuntu wesifazane ekhumula inzila yokushonelwa ngumkhwenyana noma ngumyeni wakhe. Uma umuntu wesifazane eshonelwe indoda yakhe abekade eshade nayo uyazila isikhathi esingangezinyanga eziyishumi nambili noma unyaka wonke enzela ukuhlonipha indoda yakhe. Nezingane ziyazila zizilela ubaba wazo kanye nabazukulu ngokunjalo. Kodwa izingane zona zizila isikhathi esifishane kunesikamama kuye ngokuthi umndeni wona ugcina siphi isikhathi. … Read more
Categories Culture Tags Death, Home, Ikhaya, Imicimbi yesintu, Traditional Ceremonies, Ukufa